केपी ओली झुके राजासामु शीर निहुराएर, राजाका लागि ३ दिन सार्वजनिक बिदा !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफूलाई ठूलै राष्ट्रवादी भनेर प्रचार गर्छन् । तर उनी राजासामु गएर झुकेको तस्वीर सार्वजनिक भएको छ ।
कम्बोडियामा राजा नारोडोम सिहामोनीको ६५ औं जन्मदिन कार्यक्रममा गएका छन् । त्यहाँ राजाको जन्मदिनमा तीन दिन सार्वजनिक बिदा नै दिइएको छ ।
राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र बनेको नेपालका कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजाको जन्मदिनमा पाहुना लाग्न पुगेका छन् । दुई दक्षिणपूर्वी एसियाली देश भियतनाम र कम्बोडियाको साताब्यापी भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली सोमबार राजधानी नोम पेन्ह पुगेका थिए ।
बैंककस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले त्यहाँ पुग्नासाथ दुई स्मारकमा माल्यार्पण गरे । पहिले उनले स्वतन्त्रता स्मारकमा माल्यार्पण गरे । यो स्मारक त्यहाँका स्वतन्त्रता सेनानीहरूको सम्झनामा सन् १९५८ मा निर्माण गरिएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले ओलीले स्वर्गीय राजा नरोडोम सिंहानुकको स्मारकमा पुष्पगुच्छा अर्पण गर्दै श्रद्धाले शीर निहुराएका थिए ।
सोमबार दिउँसो नै कओलीले कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनसँग भेटवार्ता गरेका थिए । गत वर्ष नेपालमा एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा भाग लिन आउँदा हुन सेनसँग उनको परिचय भएको थियो । सेनले ओलीलाई त्यतिबेलै कम्बोडियाको भ्रमण गर्ने निम्तो दिएका थिए । स्वीट्जरल्यान्डको डाभोसमा पनि दुई समकक्षीको भेट भयो । त्यहाँ पनि सेनले ओलीलाई आफ्नो निम्तो सम्झाए ।
राजाको जन्मदिनका अवसरमा कम्बोडियाले थुप्रै देशका सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखलाई निम्त्याएको थियो । तर नेपालबाहेक अरु देशबाट उच्चस्तरीय सहभागिता भएको छैन । राजाको जन्मदिनको औपचारिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी भए/नभएको विषयमा दूतावासले कुनै जानकारी दिएको छैन । विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीले उच्चस्तरीय भेटवार्ताहरू गर्ने मात्र उल्लेख थियो ।
जेहोस्, नेपालका गणतन्त्रवादी प्रधानमन्त्रीलाई कम्बोडियाले त्यहाँका राजाका जन्मोत्सवका अवसरमा भ्रमण गराउन सफल भएको छ । केही समयदेखि नेपालमा पूर्व राजाविरुद्ध आक्रामक बनिरहेका ओली कम्बोडियामा गएर पूर्वराजाको शालिकमा श्रद्धासुमन अर्पण गर्नु विरोधाभाषयुक्त देखिएको छ ।